Iyo iPhone ine Apple Penzura ichaiona nekukurumidza sekunge 2019 | IPhone nhau
Tichaona iyo iPhone neApple Penzura mu2019 pakutanga
Kushoropodzwa nevakawanda, kudiwa nevamwe vazhinji ... Iyo Apple Penzura ndiyo yaive nhanho kuburikidza hoop kubva kuApple, uye ndeyekuti mushure mekumisikidzwa kwayo vazhinji vakayeuka iyo Steve Jobs kushoropodza kwa stylus mafashoni sei aive mune avo vekutanga "mafoni" pamberi peiyo iPhone. Ndiani anoda a penzura? kunyora apo iwe uchigona kushandisa minwe yako, ivo vaikanganisa ... Uye ndiko kuedza kusapinda izvo zvinozivikanwa se fanboyPaunoyedza Apple Penzura iwe unoona kuti zvese zvinoenda kure kupfuura izvo zvaizivikanwa kusvika zvino, Apple Penzura ndeyechokwadi.
Izvi ndizvo zvinogona kuitwa neApple Penzura uye iyo Pro Pro iyo vazhinji vanoshamisika nezve kuenderana kwavo neiyo iPhone. Kwete, iyo Apple Penzura haienderane neiyo iPhone uye zvakanyanya zvikonzero zviri mune yayo diki saizi ichienzaniswa nepamusoro peiyo iPad. Zviripachena ichi hachisi chikonzero chinogombedzera kana iri iyo iPhone yatinoshandisa zvakanyanya muzuva redu kusvika nhasi, uye Apple inoedza iyo universal pakati pemidziyo yese Apple ine mupfungwa kufunga nezve iPhone inowirirana neApple Penzura, dambudziko nderekuti isu tichafanirwa kumirira kusvika 2019 kuona kurota kwezvakawanda kuchizadzika ...
Segun The Korea Herald, Apple iri kugadzira tekinoroji inodikanwa kuitira kuti Apple Penzura ienderane neiyo iPhone. Iko kushanda kweApple Penzura kunoenderana nezvapfuurar inoratidzira inokwanisa yekumusoro-inoteerera mhinduro yeApple Penzura, chimwe chinhu chatinoona pane Apple Penzura skrini. Iyo Pencil Iyo Samsung Galaxy Note semuenzaniso inoshandisa mhinduro yemagetsi, asi zviripachena kuti musiyano uripo pakati peumwe neumwe unoonekwa nekungovashandisa.
Apple iri kugadzirisa mikana yekunyora "neruoko" muma processor ayo matsva, uye izvi zvine ramangwana rimwe chete: iyo Apple kupedzisira uchitendera kushandiswa kweApple Penzura paPhones. Kune akawanda midhiya ari kuzivisa kufambira mberi mundima iyi, tichazviona muna 2019? Tichamirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tichaona iyo iPhone neApple Penzura mu2019 pakutanga
Zvinenge zvichingonzwisa tsitsi seGreen Note….
Fixmoji, kurerutsa nhamba yeEmojis pane yako keyboard [SWEEPSTAKES]
Apple Bhadhara Cash padhuze nekutanga neIOS 11.1